Izindaba - Ungayikhetha kanjani ibhulashi lokushefa elikufanelayo?
Kunamakhulu ezinhlobo zamabhulashi emakethe, eshibhe kunawo wonke angama-30, kanti amanani entengo asukela ezinkulungwaneni ezimbili kuya kwezintathu noma ngaphezulu. Kuyafana nebhulashi, uyini umehluko? Ngabe kudingekile ukuchitha izinkulungwane zamadola kubhulashi ngalo mzuzu omfushane oyi-1 nsuku zonke? Noma umuntu angathenga ama-yuan ambalwa eshibhile ukuze abe nomphumela ofanayo?
Kunolwazi oluningi mayelana namabhulashi okushefa, ake siwuhlole ndawonye namhlanje, masisebenzise okwethu ukuhlola ukuze sikhulume ngakho!
Enqubeni yokushefa emanzi, indima enkulu yebhulashi igwebu, igwebu, nokugcoba ebusweni. Lezi zinyathelo ezimbili nazo ziyingxenye yenjabulo ngesikhathi senqubo yokushefa.
Ibhulashi lingakusiza ukuthi wakhe igwebu elicebile nelicinene kusuka kokhilimu noma insipho yokumboza intshebe yakho ngokuphelele.
Ibhulashi lisiza ukuthambisa intshebe nokuswakama isikhumba, ligweme ukucasulwa yinsingo kanye nokulimala kwesikhumba lapho isikhumba singafakwanga. Ukuthamba kwebhulashi kungangena ngempumelelo kuwo wonke ama-pore, ukungcola okuhlanzekile, futhi kukulethele umuzwa oqabulayo. Okuhle noma okubi kwebhulashi lokushefa kungakulethela imizwa ehlukile phakathi kwezulu nomhlaba.
Njengamanje, amabhulashi emakethe ahlukaniswe kakhulu ngezigaba ezintathu: izinwele zokwenziwa kwefayibha, izingulube zezingulube, izinwele zebheji
Fibre izinwele zokwenziwa:
Izinwele zokwenziwa zokufakelwa, zilungele amadoda athile aphikisana nezinwele zezilwane noma izivikeli zezilwane.
izinwele zokwenziwa kwe-fiber zihlukaniswe kwaba okuhle nokubi. Izinwele ezingezinhle zokwenziwa kwe-fiber zinzima ngokwedlulele futhi azinawo nhlobo umthamo wokumunca amanzi. Yize ulwela ukuvusa isitsha, kunzima ukwenza igwebu. Ubuso obungaphezulu buzwakala njengokuxubha ubuso ngomshanelo, futhi ungabuzwa futhi ubuhlungu bokupushwa.
■ Umbala wejazi udayiwe ngezinwele ezilwa amabheji, kanti nezinwele ziqinile.
■ Izinzuzo: ezishibhile! Ayikho inzuzo ngaphandle kokuthi kushibhile.
■ Ukungalungi: Kunzima ukuphephetha amagwebu, futhi kubuhlungu ngempela kunenhliziyo ebuhlungu.
Yiziphi izinwele ezingcono zokwenziwa kwe-fiber?
Ngokuthuthuka kobuchwepheshe besimanje, izinwele zokwenziwa kwefayibha ziye zaqala ukuba nokuthamba okufana nezinwele zebheji, futhi umbala wezinwele nawo udayiwe ukuze ufane nalowo wezinwele zebheji, namandla okufakwa kwamanzi nawo athuthukile. Kepha ukushaya kusadinga ukubekezela okuncane, ngaphandle kokushoda kokumunca amanzi. Ngoba ithambile njengezinwele zebheji, ubuso obungaphezulu buzizwa bukhululeke ngokwengeziwe, ngaphandle komuzwa wokubhoboza. Uma uxabana nezinwele zezilwane futhi uthanda ukuvikelwa kwezilwane, ungakhetha izinwele ezinhle zokwenziwa kwefayibha ukuze uzizwe.
Noma ngabe yizinwele ezinhle zokwenziwa kwefayibha noma izinwele ezingezinhle zokwenza imicu, kunenkinga ejwayelekile, okungukuthi, kuzoba nezinwele ezimfishane nezinwele. Ngokuvamile, kunconywa ukufaka enye esikhundleni sonyaka.
■ Umbala wejazi udayiwe ngezinwele ezilwa amabheji, kanti nezinwele zithambile.
■ Izinzuzo: ukuthamba okuphezulu.
■ Ububi: ukumuncwa kwamanzi okubuthakathaka, isikhathi eside esinamagwebu nokulahleka kwezinwele.
Ibhulashi lokushefa elenziwe ngama-boar bristles lifaneleka kakhulu kubantu besilisa abaqala nje ukudlala ukushefa okumanzi. Izinwele zilukhuni kancane kunezinwele ze-fiber nezama-badger, ezingahlanza isikhumba kahle. Ikhono lokukhiya amanzi lezilwane zemvelo lenza kube lula ukugwema amagwebu.
Ngaphezu kwamaphutha amancane angenabumnene ngokwanele, kwesinye isikhathi kuzoba nokuzwa okubuhlungu kokunamathela ebusweni. Ngemuva kwesikhathi eside sokusetshenziswa, izinwele zizokhula kancane kancane futhi zihlukane.
■ Umbala wezinwele uyi-beige emsulwa, kanti nezinwele zilukhuni kancane.
■ Ubuhle: Izinwele zezilwane zinekhono lemvelo lokukhiya amanzi kanye namagwebu kalula.
■ Ububi: ayithambile ngokwanele, izinwele zizokhubazeka, nezinwele zingadilika.
Kwenziwe ikakhulukazi ngezinwele ezivela ezingxenyeni ezihlukene zesilwane "ibheji". Lesi silwane sitholakala eNyakatho-mpumalanga yeChina nase-European Alps kuphela emhlabeni. Ngoba kuyivelakancane futhi kuyigugu, kuyintokozo esezingeni eliphakeme kakhulu okungekho muntu ongayilingisa ebhulashini.
Izinwele zeBadger zimunca amanzi kakhulu futhi zivala amanzi ezinweleni zezilwane, ezilungele kakhulu amabhulashi okushefa. Amanzi nje amancane angenza igwebu elicebe kakhulu nelibucayi. Ubumnene futhi buyizinga elisha elingafinyelelwa uma kuqhathaniswa nezingulube zezinwele kanye nezinwele zokwenziwa kwe-fiber. Kuletha umuzwa wokuthi awufuni ukushintsha amanye amabhulashi ngemuva kokuwasebenzisa.
Vele, izinwele ze-badger nazo ziyahlelwa, futhi izingxenye ezihlukile zezinwele zinamazinga ahlukene emizwa.
■ Umbala wemvelo wezinwele zebheji uthambile kakhulu.
■ Izinzuzo: Ikhono elihle lokukhiya amanzi, igwebu elicebile nelibucayi, izinwele ezithambile, ezinethezekile ebusweni.
■ Okubi: intengo ephezulu.
Izinwele zebheji ezihlanzekile:
Kusetshenziswa iningi lentamo, amahlombe, izingalo zebheji, nezinwele ezisikiwe zangaphakathi zinzima kancane kunamanye amabanga ezinwele zebheji. Ilungele kakhulu abadlali abafuna nje ukuxhumana nezinwele zebheji. Leli zinga lokushefa ibhulashi nalo longa imali kakhulu.
Izinwele zebheji ezihamba phambili:
Yenziwe ngezinwele ezithambile ezingama-20-30% ezingxenyeni ezahlukahlukene zebheji, ezizothamba futhi zikhululeke kunezinwele ezimsulwa. Kufanelekile abadlali abafuna ukuthuthukela kwelinye izinga ngemuva kokuthinta ibhulashi lezinwele zebheji.
Izinwele ze-Super Badger:
Ama-Super badger yizinwele zebheji ezibiza kakhulu kune- "best" noma "pure". Yenziwe ngezinwele ezingama-40-50% ngemuva kwebheji. Ingaphezulu lekhwalithi ephezulu imhlophe qwa. Ngokuvamile kungamaphethelo afiphalisiwe ezinwele ezisezingeni eliphezulu “ezimsulwa”.
Izinwele zebheji zeSilvertip:
Izinwele zebheji eziphezulu yizinwele zebheji ezisezingeni eliphakeme kakhulu. Yenziwe ngezinwele eziyi-100% ngemuva. Le ngxenye yezinwele nayo ayivamile ngokweqile, ngakho-ke inani lihle kakhulu. Ingaphezulu yezinwele umbala omhlophe osasiliva, izinwele zithambile kakhulu uma zisetshenziswa, kepha azilahlekelwa ukuqina kwazo. EYurophu, izicukuthwane nabathengisi abacebile bazokhetha amabhulashi aphezulu ukugqamisa ubunikazi babo.
Izinketho ezahlukahlukene zebhulashi zizokulethela umuzwa ohlukile wokushefa. Noma ngabe ukuhlupheka noma ukunethezeka, kuya ngokukhetha kwakho.
Isikhathi Iposi: Aug-03-2021
Ithuluzi Brushes Brushes, Yenza amabhulashi, Ukugunda Izinwele, Ukushefa Setha, Setha i-Makeup Brushes, isethi yokwenza ibhulashi,